တွစ်တာဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်လုပ်နည်း - တွစ်တာ - 2019
တစ်ဦးက Twitter account ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
K-Lite ကို codec Pack ကိုလုံခြုံစွာမရရှိနိုင်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ၏လူကြိုက်အများဆုံး set ကိုယနေ့ဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။ တရားဝင် site ပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အများအပြား options များပေးအပ်သည်။ သူတို့ဟာဖွဲ့စည်းမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပရိသကိရိယာများ, filter များနှင့်ကစားသမားအမျိုးမျိုးအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းသည်။ အသုံးပြုသူ task ကိုပေါ် မူတည်. အဆိုပါလိုချင်သောရွေးချယ်သည်။ အစပိုင်းမှာ setting K-Lite ကို codec Pack ကိုတပ်ဆင်စဉ်ကသတ်မှတ်ထားကြသည်။ သူတို့ကိုမှစသောအပြောင်းအလဲလုပ်ထို့နောက်သင် Control Panel ထဲကထံမှနောက်ထပ် tools တွေကိုရယူနိုငျပါသညျ။
K-Lite ကိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းအဘို့အ Tools များ
K-Lite ကို codec Pack ကိုဗီဒီယိုကြည့်ဘို့နှစ်ခု tools များပါဝင်သည်။ Player ကိုနေအိမ်ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့်ပုံမှန်။ အခြို့သောကွဲပြားခြားနားမှုနေဆဲသူတို့ကိုတည်ရှိပေမယ့်သူတို့ကအလွန်ဆင်တူသည်။ အဆိုပါနေအိမ်ရုပ်ရှင်ရုံပုံမှန်ထက်ပို features တွေထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါဟာကစားသမားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ အပြည့်အဝအထုပ် K-Lite ကို Installing ပြည့်စုံလုံးကိုလိုအပ်သောကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမလိုအပ်ပါ။ ဒါ့အပြင်ရုပ်ရှင်ရုံ, သင်အတော်ကြာမော်နီတာပေါ်တွင်ရုပ်ပုံများကိုပြသခွင့်ပြုခြင်းနှင့်စာတန်းထိုးကို formats အမျိုးမျိုးနဲ့ပါဝင်သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါအသုံးပြုသူများအများစုသည်နေအိမ်ရုပ်ရှင်ရုံရွေးချယ်သည်။ Basik မှလွဲ. အားလုံးနီးပါးသည်အသင်းတော်အတွက်ကြောင့်ပါရှိသည်။ ပုံမှန်အရေးယူရန်ကြိုးစားရန်, သငျသညျ, Mega ၏ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
အစပိုင်းမှာ K-Lite ကို codec Pack ကိုပု ffdshow ဒီကုဒ်ဒါစာကြည့်တိုက်ပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမှားများကိုလုံးဝနီးပါးဖယ်ရှားပစ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးသည်အလွန်အရေးကြီးသောအားသာချက်, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့အစိတ်အပိုင်းများအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ installation ကိုစဉ်အတွင်း program ကိုအများဆုံးအစီအစဉ်များသည်ဤဒီကုဒ်ဒါသုံးစွဲဖို့အကြံပြုထားသည်။ Ffdshow လည်း LPCM format နဲ့ဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုသည်။
ffdshow filter ကိုစာကြည့်တိုက်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် setting များကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ချိန်ကမှာမျိုးစုံ applications များအတွက်ဒီကုဒ်ဒါစာကြည့်တိုက်၏အသုံးပြုမှုကိုတားမြစ်ဖို့လွယ်ကူစွာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို program list ကနေစစ်ထုတ်ဖယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား, ထို့နောက်အခြားဒီကုဒ်ဒါကြောင့်များတွင်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်။
လိုအပ်သောလုပ်ရပ်တွေကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အတွက်သော graphical ပတ်ဝန်းကျင် Ffdshow ။
Splitters - ထို့နောက်အသံနှင့်ဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများအားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌ထားတဲ့သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများ, ထဲသို့ဒေတာစီးကိုဝေအထူးအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့အတော်လေးမကြာသေးမီကထင်ရှား။ , သငျသညျ K-Lite ကို codec Pack ကို install လုပ်သည့်အခါသငျသညျ splitters သို့မဟုတ် Default အနေနဲ့ရန်ပုံငွေအမျိုးမျိုးရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
codec Tweak Tool ကို
ဤသည်အပိုဆောင်းကိရိယာတခု codec Tweak Tool ကိုပုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများကို install စီမံခန့်ခွဲ။ ဒီ tool နှင့်အတူသင်တစ်ဦး codec ကိုအမှားတွေ့ပါ, ထိုသို့ disable နိုင်ပါတယ်။ ဒီ utility ကို၏နောက်ထပ်အသုံးဝင်အင်္ဂါရပ် - backup လုပ်ထား။ ရာမှတစ်ဦးပျက်ကွက်သို့မဟုတ်မမှန်ကန်ကြောင်းအသုံးပြုသူလုပ်ဆောင်ချက်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကြောင့်မူရင်းအခြေအနေမှပြန်လာရန်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
မီဒီယာအင်ဖို Lite ကို
ဒီ tool က installed ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများအပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်တစ်ခုချင်းစီအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်နှင့်အမှားဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘယ်မှာသိရှိနိုင်ဖို့။
packet ကို K-Lite ကို codec Pack ကိုတဦး၏ installation ကိုပွီးနောကျ, လုနီးပါးမည်သည့်ဗီဒီယိုကိုမည်သည့်ပြဿနာများမပါဘဲကစားပါလိမ့်မယ်။ ပင်အခြေခံဗားရှင်းလုံလောက်ပေ။ ပိုများသောအတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများသည်ပရိသတ်အဘို့အပိုဆောင်းကိရိယာအားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်: « Standart »အပြည့်အဝ»နှင့်« Mega »»။
အကြောင်းအရာပြန်ဖွင့်နှင့်အတူပြဿနာများအကြောင်းကိုမေ့လျော့ဖို့ software ကို configure ့လုံလောက်သောအချိန်;
K-Lite ကို codec Pack ကိုအခမဲ့ Download
တရားဝင် site ကိုမှနောက်ဆုံးကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ Download
K-Lite ကို codec Pack ကို configure လုပ်နည်း ကျနော်တို့ Windows 8 ကိုများအတွက်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများကို select Vorbisfile.dll စာကြည့်တိုက်နှင့်အတူကိုးကွယ်ရာ Windows7တွင်မာလ်တီမီဒီယာကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
K-Lite ကို codec Pack ကို - ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့မည်သည့်ပုံစံကိုမီဒီယာပလေယာဗီဒီယိုဖိုင်များကိုသင့်လျော်ပြန်ဖွင်သေချာစေရန်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများအစုတခု။
အမျိုးအစား: Windows အတွက်အသံနှင့်ဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ
ရေးသားသူ: codec လမ်းညွှန်
Size: 14 MB အထိ